Guddoomiyaha Aqalka Sare Somaaliya oo la kulmay Wafdi kasocda Midowga Yurub – Radio Daljir
Guddoomiyaha Aqalka Sare Somaaliya oo la kulmay Wafdi kasocda Midowga Yurub
Maajo 9, 2018 2:14 g 0
Guddoomiyaha Aqalka sare ee Baarlamanka Soomaaliya, Cabdi Xaashi C/laahi, ayaa Xafiiskiisa magaaladda muqdisho wuxuu ku qaabbilay wafdi ka socda midowga Yurub, waxaana uu kula sheekeestay wafdigan sida ugu habboon ee loo joogtayn karo kaalmada uu midowga Yurub sii Soomaaliya.
Wafdiga ka socda midowga Yurub ayaa Guddoomiyaha ka dhagaystay baahiyaha gaarka ah ee uu goluhu qabo iyo meelaha uu doonayo in Gacan laga siiyo.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in xubnaha Aqalku sare ay u baahanyihiin Waddamada Yurub loo geeyo tababarro aqoon kororsi ah, gaar ahaan Dalalka uu nidaamka federaalka ka hirgalay.
Wuxuu sidoo kale Guddoomiye Xaashi, ka codsaday inuu midowga Yurub Gacan ka geysto sare u qaadidda xiriirka Aqalka sare iyo maamul Goboleedyada Dalka.
Guddoomiyaha iyo xubnaha ka socday Midowga Yurub ayaa isla qaatay muhiimadda ay leedahay dhammaystirka howlaha dib u eegista dastuurka KMG ah iyo sidii uu EU-ga ay Gacan uga gaysan lahaa habsami u socodka howlaha dib u eegista Dastuurka Dalka.